तपाईंको आजको दिन कस्तो रहन्छ ? हेर्नुहोस् आज भदौ २ गते शुक्रबारको राशिफल:
September 18, 2020 1202
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) पारिवारि’क यात्राका क्रममा स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने हुनाले समयमा कामहरु बन्नेछन् । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्निबिच मायाको डोरो अझ कसिलो भएर जानेछ । पारिवारिक ‘यात्रा हुने अधिक सम्भा’वना रहेकोछ भने यात्राका क्रममा बिभिन्न रमाईला स्थलहरुको भ्रमण गर्न सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईँकै पक्षमा आउने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) अन्य क्षेत्रमा व्या’स्त हुदा पढाई लेखाईमा तपाईको नाम अरुभन्दा पछि आउनेछ । प्रेममा अबिश्वास बढ्नेछ भने सन्तान तथा छो’राछोरिले तपाईको काममा खासै सहयोग गर्ने छैनन् । भौतिक सम्पति तथा बिलाशि सामानको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । प्रेममा नचाहादा नचाहादै छुट्टीनु पर्ने बाध्यता आ’उनेछ । व्यावसायमा लगानि गरेपनि प्रतिफल प्राप्त गर्न केहि समय कुर्नु पर्नेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) आमा तथा आफन्तबाट भनेजस्तो सल्लाह तथा सुझाब पाईने हुनाले सु’धारात्मक काम गर्न सहयोग हुनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट राम्रो आम्दानि हुनेछ । समाजिक काममा समय दिनु पर्नेछ भने तपाईको काम देखि सबै खुसि हुनेछन् । राजनिति तथा समाजसे’वामा समय लगानि गर्नेह’रुले सर्बसाधारण सँग सन्तुतिल व्यबहार गर्नु’होला काम बिग्रने हुँदा मान सम्मानमा कमि हुनेछ । सवारी साधनको व्यापार व्यावसाय सुरु गर्दा भनेजस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) महत्व’कांक्षी योजनाहरु सार्वज’निक गरि आर्थिक क्षेत्र बलियो बनाउन सकिनेछ । लेखन कलाको बिकास हुनेछ भने लेखेरै नाम कमाउन सकिनेछ । घाटि सम्बन्धि समस्या ठिक भएर जानेछ । दा’जसभाई तथा बन्धुबान्धबको सह’योगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । छोटो दुरिको यात्राको तय गर्न सकिनेछ । माया प्रेमको ठोरो कसिलो भएर जानेछ भने जीवन साथिको भरपुर सहयोग पाईनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) वाता’बरण तथा खानपानमा ध्यान दिनुहोला सा’मान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउनेछ । बिद्यामा अरु भन्दा पछि परिने हुँदा मन खिन्न हुनेछ । प्रशस्त समय लगानि गरेपनि समयमा काम नबन्ने हुँदा मनमा निरासा पैदा हुनेछ । मध्यान्हबाट समय उत्तम रहेकोले सानो प्रयत्नले राम्रो काम गरि फाईदा लिन सकिनेछ भने प्रतिश्पर्धिहरु परास्त हुँनेछन् । माया प्रेममा सामि’प्यता बढेर जानेछ । अध्ययन अध्यापनमा प्रगति गरि गन्तब्य भेटाउँन सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) अध्य’यनमा सुधार भएर जानेछ भने अरुलाई पछाडि छोडेर अग्र पंतिमा आउँन सकिनेछ । परिवारका साथ रमाईलो बाता’बरणमा स्वादिष्ट भो’जन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मेहनेत गर्दा आटेको काम बन्नेछ भने जुझारु कार्यशैलिले लक्ष्य तथा गन्तब्य पहिल्या’उँन सहज हुनेछ । व्यावसाय फस्टा’एर भने लगानिको नयाँ बाताबरण बन्नेछ भने आम्दानिमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ । राजनीतिमा पद प्राप्तीको योग रहेकोछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) काम गर्दा कानु’नको पालना राम्रोसँग गर्नुहोला राज्यबाट दण्ड तथा जरिवान हुँन सक्छ । माया प्रेमको दुरि बढ्ने हुनाले मनमा नरामाई’लो महशुस हुनेछ । यात्राको क्रममा रुपैया पैसाको सहि परिचालन गर्न नसक्दा खर्च बढ्नेछ । बैदेशिक यात्राको तय हुनेछ भने बिदेशि सामान तथा रुपैया पैसा हातलागी हुने योग रहेको छ । बिदेशमा बसेर अध्ययन तथा काम गर्ने’हरुले आजको दिन आफ्नो कामदेखि सन्तुुष्ट हुँनेछन् ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) आयभावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले खनिज प’दार्थ तथा तरल पदार्थको व्यापार व्या’वसाय फस्टाएर जानेछ । आर्थिक अवस्था राम्रो हुने तथा नया प्रकृतिको काम गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईमा मन जाने हुना’ले सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने तथा नया ठाउबाट प्रेम प्रस्ताब आउनेछ । ईच्छा आकांक्षा पुरा गर्न सकिनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) समा’जसेवा तथा राजनितिमा समय दिनेहरुले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको सहयोग पाउँनेछन् । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आम्दानि’का बाटाहरु फराकिला हुनेछन् । अध्ययन तथा अनुशन्धा’नको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ भने तपाईको बौद्धिक&ताको सबैले सम्मान गर्नेछन् । गीत संगित तथा कला साहित्यमा समय दिनेहरुले मनग्गे लाभ लिन सक्ने:छन् । प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) समय तथा परिस्थितिअनु’सार चल्न नसक्ता अलि दुःख पा’इनेछ। पहिलेका निर्णयले काममा चुनौती आउने देखिन्छ। अरूको व्यवहारले शंका उब्जाए पनि मान्यजनको सुझाव शिरो’धार्य गर्दा लाभ मिल्नेछ। महत्वाकांक्षी योजना तत्काल सार्व’जनिक गर्न केही समय पर्खनुहोला। परिवार’जनको सहयोग लिँदा राम्रो हुनेछ। धार्मिक क्षेत्र तथा परोपकारी काममा सहभागि भई काम गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) आफन्त तथा दिदि’बहिनि सँग साना कुरामा राय बाजि’नेछ भने घमण्ड गर्ने बानिले आ’फैलाई समस्या पार्नेछ । आर्थिक मुद्दाहरु हल हुनुको सट्टा थप जटिल बन्नेछ । बोलिमा रुखोपना बढि आउने हुदा आफन्त तथा साथिभा’ईहरु टाडिनेछन् । भौतिक सम्पति प्र’योग गर्दा ख्याल गर्नुहोला नराम्रा घट्ना’हरुको सामना गर्नु पर्नेछ । नसोचेको धन तथा सम्पति प्रयोग गर्न पाईने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेममा सामान्य मन&मुटाब सिर्जना हुनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) माया प्रेम’मा नजिक हुने समय रहेकोछ भने दा’म्पत्य जीवन सहज मार्गमा बित्नेछ । आर्थिक स्थिति मजभुत हुने तथा व्यापार व्यावा’सायमा मन’ग्गे आम्दानि हुनेछ । लामो दुरिको मनोरञ्जा’नात्मक यात्राको तय गरि भरपुर रमाउन सकिनेछ । पढाई लेखाईमा भनेजस्तो प्रगति हुने हुदा मन प्रशन्न रहनेछ । भौतक बस्तु तथा बिलाशि सामानको प्रयोग मार्फत अरुको मन आ’फुतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ ।
Prevशुरू भयो मलमास, अब के गर्न हुन्छ के हुँदैन ? थाहा पाउनुहोस्
Nextज्योतिष शास्त्र अनुसार कुन महिनामा जन्मिएका महिलाको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? थाहा पाउनुहोस्
आज मंसिर ५ गते शुक्रबारको राशिफल हेर्दै दिनको सुरुवात गर्नुहोस्
बक्रकुण्ड महादेवको दर्शन गर्दै आज शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्
चैतन्य र सामन्थाको सम्बन्धवि`च्छेद हुनुको मुख्य कारण यस्तो रहेछ